Fisoràtana anarana Alahady 24 mey 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Fisoràtana anarana Alahady 24 mey 2020 |
Fisoràtana anarana Alahady 24 mey 2020
Publié le 20 mai 2020 à 07:05
Toy izao manaraka izao indray ny fandaminana ny amin’ny fanompoam – pivavahana amin’ny Alahady 24 mey 2020.
1. Ireo maniry hivavaka amin’ny Alahady 24 mey 2020 dia afaka misoratra anarana :
eto amin’ny site web
na ao amin’ny Facebook FJKM Ambavahadimitafo
na ao amin’ny sacristain (Rakotonandrianina Tantely)
na ao amin’ny laharana 034 36 311 76
2. Hisy fidirana in-4 @ Alakamisy izao
Efa nikatona ny fisoràtana anarana tompoko. Afaka miantso ny 034 36 311 76 raha misy fandaminana manokana.
Afaka misafidy amin’ireo ora fidirana ireo izay tonga hivavaka. Saingy kosa rehefa feno ny isa 35 amin’ny ora izay nanaovana safidy dia halamina ny mpivavaka hiditra amin’izay ora malalaka kanefa tsy nosafidiana.
Ny zoma 22 mey amin’ny 18 h 00 no farany fisoratana anarana mba ahafahana mamoaka ny lisitra ny Sabotsy 23 mey 2020.
3. Mbola mitombina avokoa ireo fepetra ara – pahasalamana izay napetraka (manao aro vava, elanelana 1 metatra, soratana ny anarana, fanampin’anarana, adiresy ary laharana finday,…).
4. Noho ny antony ara – pahasalamana dia tsara raha tsy mitondra zaza latsakin’ny folo taona. Dia tahaka izany ihany koa ireo olona marefo ara – pahasalamana.
5. Hivoaka amin’ny site web sy ny facebook ny Alahady hariva amin’ny 18 h 00 ny fanompoam – pivavahana.
Dia mankasitraka antsika mpianakavin’ny finoana ny amin’ny fanarahana ny fandaminana.
Dia maniry soa ho antsika tsirairay avy dia samy ho tahian’Andriamanitra.
Ny Biraom – piangonana.